Qalabka ugu wanaagsan ee dib loo dhigo - Teknolojiyad moodada leh | Ragga Stylish
Qalabka ugu wanaagsan ee dib u habeynta
Alicia tomero | | Tiknoolaji
Qunsuliyadaha 'Retro consoles' ayaa wali caan ah oo moodada ah. Horumarkeena dhanka teknolojiyada kama uusan tagin mashiinadan ama ciyaarahooda caadiga ah. Waxaa jira cinwaano hore oo wali ku sii dhacaya jacaylka xitaa dadka wakhtiyada casriga ah kuwa kalena waxay dib u abuuraan nostalgia waqtiyadii hore.
Haddii aad jeceshahay inaad ku raaxeysato qalabka noocaan ah, halkan waxaan ku soo jeedineynaa liistada kuwa aan maanta ka heli karno suuqa. Waxay yihiin consoles'ka gadaal gadaal u jaban, inta badan Shiinaha, iyo si aan awood ugu yeelano inaan wax u iibsan karno waa inaan leenahay dhinacyo kala duwan sida isku xirnaanta.
1 Waa maxay qunsuliyadaha gadaal u dhaca maxaayse u jecelyihiin?
2 Fasallada qunsuliyada ee Retro
3 Noocyada qalabka kombiyuutarka ee Retro
3.1 Mega Drive WirelessHD
3.3 CXYP Qalabka Ciyaaraha Gacanta
3.5 C64 Mini - Lacag Qoto Dheer
Waa maxay qunsuliyadaha gadaal u dhaca maxaayse u jecelyihiin?
Waa aalado ama aalado yar yar oo kuu ogolaanayaa inaad si ay u ciyaaraan kulan video jir iyo sawiradeeda, markii la matalayo, ciyaaraha waxaa lagu daawan doonaa 2D. Iyagu waxba kuma laha qunsuliyadaha hadda jira, ciyaarta waa mid shaqsi ah ama shaqsi ahaan loo wadaagayaa, wax aan ku dhicin kuwa casriga ah, halkaasoo ciyaarta ay noqon karto mid badan iyo khadka tooska ah.
Qalabyada 'Retro consoles' sida maxaa yeelay way jaban yihiin, waxay qabsadaan meel yar, way fududahay in la isticmaalo, si fudud ayaa loo xajiyaa waana la qaabeyn karaa. Waxay marin u helaan ciyaaraha caadiga ah ee ay jeclaayeen noloshooda oo dhan, in kastoo qaar badan oo ka mid ahi leeyihiin xadka ciyaarta.
Fasallada qunsuliyada ee Retro
Waxaan helnay seddex nooc oo ah qalabka loo yaqaan 'retro console', laakiin kuwa aan aadka u jecel nahay waa kuwa asalka ah, kuwa nadiifiya sida iska cad u jecel.
Konsollada dhabta ah ee hore waa kuwa rasmiga ah ee suuqa ku soo baxay daabacaadoodii koowaad oo hadda lagu iibinayo gacan labaad. Qaarkood xitaa waxay ku nastaan ​​baakadooda saxda ah waxayna ku yeelan karaan qiimo aad u sarreeya suuqa.
Qunsuliyadaha Retro dib ayaa loo soo saaray: Waxay yihiin nuqullo loo qaabeeyey qaab isku mid ah iyo astaamo kuwii hore, laakiin leh naqshad aad u badan oo isafgarad leh iyo ciyaaro horay loo rakibay
Qunsuliyadaha Shiinaha iyo kuwa la qaadan karo: Iyagu waa nooc aad u yar, oo lagu sameeyay nidaam gaar ah oo bixiya kumanaan ciyaarood. Dhinaca kale, waxaan arki karnaa inay jiraan noocyo kaladuwan oo aad uga qiimo jaban jeebka in kasta oo ay ku yeelan karaan dhib la'aanta haysata cabsida laga baqay gelitaanka.
Noocyada qalabka kombiyuutarka ee Retro
Mega Drive WirelessHD
Daabacaaddeeda waa la casriyeeyay, oo leh 16 jajab iyo wax soo saar HD iyo isku xirnaanta HDMI. Waxay ku imaaneysaa qalab casri ah oo loo yaqaan 'Mega Drive / Genesis games' iyo liisanka Sega. Waxay ka kooban tahay laba koontarool oo aad ugu eg kuwa caadiga ah, oo leh 6 badhan oo la mid ah noocyada kale iyo wireless-ka.
Waxay ka kooban tahay qayb loogu talagalay waxaad geli kartaa gulufyadii hore ee asalka ahaa wuxuuna dammaanad qaadayaa xalka HD 720p. Waxa kale oo ku jira shaqada keydinta, dib u soo celinta iyo dib u habeynta horumarka ciyaarta. Ciyaaraha ugu caansan ee loo yaqaan 'The Axe Golden' ama 'Badalaadda Bahalka' ama Mortal Kombar la kariyey ama Fighter Street.
Shirkaddeeda reer Japan ee 16-bit soo saarta Nintendo waxay dooneysay inay la tartanto Mega Drive, Sega ee qalabka kale ee 16-bit ah, waana ay sameysay. Waa nooc casriyeysan laakiin waxay haysaa ku dhowaad isla naqshaddii, laakiin qaab yar.
Waxaa ku jira laba koontarool oo leh nashqad isku mid ah isla isku xiraha. Waxaa loogu talagalay in lagu xiro fiilada HDMI iyo awoodda USB. Bixinta 32.000 midabo iyo sawiro si faahfaahsan ufiican iyo gulufyo gaaraya 32 megabyte, oo ikhtiyaar u leh in ciyaarta la badbaadiyo oo la soo cesho waqti kasta.
Ciyaaraha caadiga ah ee aan ka heli karno waa Dameer Kong Country, The Legend of Zelda, Mario Bros oo leh tartamadiisa tartanka xiisaha leh, Megan Man X, Yoshi's Island ama Super Castlevania IV.
CXYP Qalabka Ciyaaraha Gacanta
Waa retro iyo Console mini la qaadan karo oo dhab ahaantii weyn. Waa mashiin aad loo iibiyay oo ay ku jiraan ilaa 10 emulators horay loo sii rakibay oo ka mid ah konsollada ugu caansan sida Neo Geo, Super Nintendo ama Game Boy.
Waxay ku timid diyaar garow martigaliso ilaa 3000 oo kulan waxayna ku xirnaan kartaa telefishanka. Waxaa ku jira kala duwanaansho ballaaran oo qaabab ah, waxaa ku jira kamarad gadaal ah oo dhawaqeedana loo habeyn karo.
Waa aaladda loo yaqaan 'Mini Mini console', oo aad uga yar tan asalka ah iyo tan doonaya inuu soo xasuusto bilowgii ciyaaraha fiidiyowga, maadaama ay ahayd mid ka mid ah tacsiyeyntii ugu horreysay ee laga furay suuqa.
Waxaa lagu iibiyaa qalab fog laakiin waad isticmaali kartaa qalabka fog fog ama xitaa iibso mashiin labaad. Astaamaha cusub ee ay ka mid tahay ayaa ah inaad ku sii wadi karto ciyaarta meesha aad uga tagtay mahadsanid afarta boos ee dhibcaha ganaaxa ee ciyaar kasta ay leedahay.
Waxaad kala dooran kartaa aragtiyaha kala duwan: inta udhaxeysa sawirka xalka asalka ah oo leh sawirka ciyaarta asalka ah sida loogu talagalay ama leh sawirka 4: 3 ee laga soo qaatay NES asalka oo si tartiib tartiib ah u jiidaya.
Waxaa ku jira 30 ciyaarood oo caan ah, iyaga waxaa ka mid ah Dameer Koon, Super Mario Bros, Lengend of Zelda, Bubble Bobble, Final Fantasy ama Pac-Man.
C64 Mini - Lacag Qoto Dheer
Qalabkani wuxuu ahaa guul weyn oo iib ah 1980s. Waa nuqul ka mid ah kombuyuutarka Commodore 64 ee lahaa 64 Kb oo xusuus ah RAM waana nooc caan ah oo loogu talagalay dadka jecel retro, asal ahaanna Joystick.
Wuxuu la yimaadaa 64 ciyaarood oo horay loo sii rakibay halkaas oo aan ka heli doonno ciyaaraha isboortiga, xujooyinka, ciyaaraha madal iyo kuwa wax toogta. Ma dooneysaa inaad wax badan ka ogaato ciyaartooda? Waad geli kartaa sharraxaadda sheyga adoo galaya boggan waxaadna ogaan doontaa waxa ku jira oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Qalabka ugu wanaagsan ee dib u habeynta